सूचना/प्रविधि Archives - Page3of 27 - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > सूचना/प्रविधि - Page 3
By खबर मञ्च / June 25, 2019 / सूचना/प्रविधि / Comments Off on सरकारसंग रिसाएकाे पत्रकार महासंघले गर्याे विज्ञापन सम्बन्धि विधेयककाे स्वागत
काठमाडाैं । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सरकारविरुद्ध आन्दाेलनमा हाेमिएकाे नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञापन विधेयककाे भने खुलेर स्वागत गरेकाे छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विज्ञापन विधेयकमा भएकाे क्लिन फिडकाे व्यवस्थालाई सकारात्मक भन्दै विधेयककाे स्वागत गरेका छन् । ” सरकारको आमसञ्चार नीति र पत्रकार महासंघले विभिन्न चरणमा अघि सारेको मागपत्र तथा पारित दस्तावेजहरुमा […]
By खबर मञ्च / May 27, 2019 / सूचना/प्रविधि / Comments Off on नेपाल टेलिकमले ल्यायो ‘रिपब्लिक डे अफर’
काठमाडौँ-नेपाल टेलिकमले कम्पनीले गणतन्त्र दिवस २०७६ को अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘रिपब्लिक डे अफर २०७६’ अफर सार्वजनिक गरको छ। टेलिकमले भोलि मंगलबार अर्थात् जेठ १४ गतेबाट लागु हुने गरी अफर योजना ल्याएको हो। अफर योजना अन्तर्गत ५० रुपैयाँमा ‘रिपब्लिक डे कम्बो प्याक’ उपलब्ध गराउने भएको छ। सो अफर ग्राहकले जेठ १४ देखि जेठ १६ सम्म खरिद […]
By खबर मञ्च / May 23, 2019 / खबरमञ्च विशेष, सूचना/प्रविधि / Comments Off on पत्रकारका लागि झन कडा कानून ल्याउँदै सरकार, १ कराेड जरिवानादेखि पन्ध्र वर्ष कैदसम्म
काठमाडाैं । सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्ने गरि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएकाे भन्दै यतिबेला आम सञ्चार जगत आन्दाेलित छ । यही विधेयकलाई लिएर यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारविरुद्ध खनिएकाे छ । साथै उसले यसैलाई सदनमा आफ्नाे नयाँ एजेण्डाकाे रुपमा अगाडि सार्ने तयारी […]
By खबर मञ्च / May 20, 2019 / सूचना/प्रविधि / Comments Off on राष्ट्र बैंकको निर्देशनः एटिएम मेसिनमा नेपाली भाषा राख
काठमाडौँ । तपाईंलाई आवश्यकपर्ने पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कसरी निकाल्नुहुन्छ ? एटिएम मेसिनको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा चेकमार्फत गर्ने गर्नुभएको छ ? साक्षर व्यक्तिले सहजै रुपमा एटिएम मेसिनमा कार्ड राखेर सहजै पैसा निकाल्न सक्ला । निरक्षर, कम अध्ययन भएका वा अङ्ग्रेजी भाषा नजान्नेका लागि एटिएमको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा नै समस्या हुने गरेको छ । उपभोक्ताको […]
By खबर मञ्च / May 10, 2019 / सूचना/प्रविधि / Comments Off on इन्टरनेट र केबल टीभीको प्रशारण कुनै पनि बेला रोकिन सक्ने
काठमाडौं । देशभरका इन्टरनेट र केबल टीभीको प्रशारण कुनैपनि बेला रोकिन सक्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोगको महशूलका सम्बन्धमा नेपाल केबल टीभी महासंघ र प्राधिकरणबीच भएको विवाद नसुल्झिएकाले देशभरकै इन्टरनेट र केबल टीभी प्रशारणमा अवरोध आउन सक्ने भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उसको पोल प्रयोग गरेबापत लिँदै आएको महशूलमा ठूलो रकम […]
By खबर मञ्च / April 29, 2019 / सूचना/प्रविधि / Comments Off on विदेश जाँदा आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा कल गर्न सकिने
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा आजदेखि प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । प्रारम्भमा यो सेवा भारत र चीनमा लागू हुने प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिए । अब नेपाल टेलिकमका जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता चीन वा भारत गएको समयमा आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा कल गर्न सक्ने छन् । नेपालबाट आएको कल उठाउन र एसएमएस […]